Dutchtown Main Streets' 2021 वार्षिक रिपोर्ट • DutchtownSTL.org • Dutchtown, St. Louis, MO
डचटाउन मुख्य सडकको २०२१ वार्षिक प्रतिवेदन
प्रकाशित अप्रिल 17th, 2022
२०२० मा डचटाउनलाई लगनशील र महामारीको माध्यमबाट अगाडि बढेको देख्दा हामी गर्व गर्छौं। हाम्रा छिमेकीहरूसँग हात मिलाएर, DT2020 · डाउनटाउन डचटाउनले स्वयंसेवकहरू संगठित गर्न, नयाँ व्यवसायहरूलाई स्वागत गर्न, सुधारहरू सुरक्षित गर्नमा ठूलो प्रगति गर्यो। मार्क्वेट पार्क, र अधिक धेरै। तपाईले हाम्रो २०२० को बारेमा यहाँ पढ्न सक्नुहुन्छ.
यो अर्को वर्ष पछि छ, र विश्वव्यापी स्वास्थ्य संकट जारी छ। जे होस्, हाम्रो समुदायले सबैका लागि राम्रो डचटाउन निर्माण गर्न जारी राख्यो। र यसको लागि, हामी सबै हुनुपर्छ डचटाउन गर्व.
डचटाउन मुख्य सडकहरू प्रस्तुत गर्दै
2021 को गर्मीमा, पहिले डाउनटाउन डचटाउन भनेर चिनिने संगठन (छोटोमा DT2) ले एउटा नयाँ नामको अनावरण गर्‍यो: डचटाउन मुख्य सडकहरू। जबकि संगठनको पहिले मेरोमेक र भर्जिनिया वरपरको क्षेत्र भन्दा फराकिलो दायरा थियो, हामीले हाम्रा छिमेकीहरूलाई हाम्रो विश्वास थाहा दिनु महत्त्वपूर्ण छ भन्ने महसुस गर्यौं। डचटाउनको प्रत्येक सडक मुख्य सडक हो.
जहाँ व्यवसाय र छिमेकीहरू सँगै फस्टाउँछन्।
Dutchtown Main Streets ले आर्थिक विकास र डचटाउन छिमेकमा अवसरलाई बढावा दिएर एक सम्पन्न समुदाय र साझा समृद्धिलाई बढावा दिन्छ।
विविध स्वामित्व आकर्षित गर्नुहोस्
खाली ठाउँहरू, ठाउँहरू, र अनुहारहरू प्रचार गर्नुहोस्
सेन्ट लुइस मुख्य सडक पायलट कार्यक्रम
2019 मा, Downtown Dutchtown सँग साझेदारी सुरु भयो मिसौरी मुख्य सडक जडान मिसौरी मा पहिलो UrbanMain जिल्ला बन्न। अर्बनमेन कार्यक्रम बन्न विस्तार भएको छ सेन्ट लुइस मुख्य स्ट्रीट्स पहल, अन्य क्षेत्रहरू जस्तै Laclede's Landing र Delmar Corridor कार्यक्रममा सामेल हुने।
सेन्ट लुइस मुख्य सडक पहल निम्नानुसार छ मुख्य सडकको चार बिन्दु दृष्टिकोण, डिजाइन, आर्थिक जीवन शक्ति, पदोन्नति, र संगठनलाई जोड दिँदै। डचटाउन मुख्य सडकहरूले चार सम्बन्धित सिर्जना गरेका छन् समितिहरु यस दृष्टिकोणलाई दिमागमा राखेर प्रत्येक बिन्दुमा फोकस गर्न।
२०२१ को अन्त्यमा, डचटाउन मेन स्ट्रिटहरूले ए व्यापक कार्य योजना जसले आगामी वर्षहरूमा समितिहरूको कामलाई मार्गदर्शन गर्नेछ।
डचटाउन कमिटीहरू के गरिसकेका छन्?
उल्लेख गरेझैं डचटाउन समितिहरु डचटाउन मेन स्ट्रिटको मिशन र कामलाई निर्देशन र कार्यान्वयन गर्न जिम्मेवार छन्। डचटाउन मेन स्ट्रीट्स बोर्ड अफ डाइरेक्टर्सको सदस्य र समुदायको ठूलो सदस्य प्रत्येक समितिको सह-अध्यक्ष। समितिहरूमा सहभागी हुन चाहने अन्य समुदायका सदस्यहरू पनि समावेश छन्।
डचटाउन समितिहरूले समुदायलाई सूचित व्यापक कार्य योजना विकास गर्न मद्दत गर्यो। योजनाले 2022 मा समितिहरूको कामलाई निर्देशित गर्न मद्दत गर्नेछ, जस्तै समुदाय, समिति सदस्यहरू, र बोर्डबाट जारी इनपुट।
2021 मा डचटाउन कमिटीहरूले के पूरा गर्यो र तिनीहरूले 2022 को लागि के योजना बनाएका छन् भनेर तलको संक्षिप्त विवरण छ।
डचटाउन सेफ क्लिन एण्ड ग्रीन कमिटीलाई मेन स्ट्रिट चार-बिन्दु दृष्टिकोणसँग राम्रोसँग पङ्क्तिबद्ध गर्न २०२१ मा डचटाउन डिजाइन समितिमा गाभियो। डिजाइन समितिको छाता अन्तर्गत, उपसमितिहरूले सार्वजनिक स्थानहरूमा सुधारहरू पछ्याउँछन्, सौन्दर्यीकरण र सरसफाइ प्रयासहरू गर्छन्, र छिमेकमा सुरक्षा सुधार गर्ने अवसरहरू खोज्छन्।
2021 बाट हाइलाइटहरू समावेश छन्:
यो छिमेकी सौन्दर्यीकरण सेवा कार्यक्रमसँगसँगै डचटाउन समुदाय सुधार जिल्ला, रोजगार जडान, र मानवता सेन्ट लुइसको लागि आवास: सौन्दर्यीकरण टोलीका सदस्यहरूले नियमित रूपमा फोहोरका डिब्बाहरू खाली गर्न र जिल्लाभर फोहोर हटाउन CID फुटप्रिन्ट गस्ती गर्छन्। टोलीका सदस्यहरू डचटाउन समुदायबाट भाडामा लिएका छन् र $ 15 प्रति घण्टामा सुरु हुन्छ।
सरसफाई घटनाहरू छिमेक भर: हाम्रो सबैभन्दा सफल सफाई मध्ये एक थियो यसलाई सफा राख्नुहोस् 2021 को पतन मा, संग साझेदारी मा स्लाको (सेन्ट लुइस एसोसिएसन अफ कम्युनिटी अर्गनाइजेसन) र सेन्ट लुइस क्षेत्रका फुटबल बूस्टरहरूको टोली डचटाउनमा खेलकुद प्रवर्द्धन गर्न प्रतिबद्ध छ। डिजाइन समितिले पनि साथ दिएको छ EarthDay365 खराब मौसमको बावजुद दर्जनौं स्वयम्सेवकहरू तान्ने ठूलो सफाई प्रयासको लागि।
डचटाउन CID मा क्युरेटेड क्यामेरा नेटवर्क पायलट कार्यक्रम: CID ले अपराध रोक्न र घटना घटेमा भिडियो प्रमाण र सवारी साधन डेटा प्रदान गर्न जिल्ला फुटप्रिन्टका धेरै बिन्दुहरूमा लाइसेन्स प्लेट रिडरहरू सहित फ्लक क्यामेराहरू स्थापना गर्यो।
ब्लक आयोजन: डिजाइन समितिले छिमेकीहरूलाई ब्लक पार्टीहरू आयोजना गरेर, एकअर्कालाई भेट्ने र चिन्ने अवसरहरू उपलब्ध गराउने र सञ्चार सञ्जालहरू स्थापना गरेर छिमेकीहरूलाई एकै ठाउँमा ल्याउने काम गर्यो।
२०२२ मा, डिजाइन समितिले डचटाउनको धारणा र वास्तविकताहरू सुधार गर्न अवसरहरू पछ्याउन जारी राख्नेछ। यी प्रयासहरूमा निरन्तर सरसफाइ प्रयासहरू, सार्वजनिक कला परियोजनाहरू, छिमेकको गन्तव्य ब्रान्डिङ र वेफाइन्डिङ, संगठित ब्लकहरूको हाम्रो नेटवर्कमा नयाँ छिमेकीहरू थप्ने, र सार्वजनिक स्थानहरूमा गतिविधि प्रवर्द्धन समावेश छन्। थप रूपमा, प्रारम्भिक स्थापनाहरूको नतिजाको आधारमा, क्युरेट गरिएको क्यामेरा नेटवर्कको भागको रूपमा २०२२ मा डचटाउन CID को मुख्य कोरिडोरहरूमा थप क्यामेराहरू आउँदैछन्। डिजाइन समितिले पनि निकटसँग काम गर्नेछ Gravois-Jefferson योजना समतामूलक व्यावसायिक विकासलाई प्रोत्साहन गर्ने विशेष प्रयोग जिल्ला विकास गर्न डिजाइन समीक्षा समिति।
सह-अध्यक्षहरू: जोएल सिलिमन र अमांडा फेयर
डचटाउन डिजाइन समितिमा सम्पर्क गर्नुहोस् Design@dutchtownstl.org
आर्थिक जीवन्तता समिति
डचटाउन आर्थिक जीवन्तता समिति लगानी आकर्षित गर्न र डचटाउन व्यापार समुदायलाई बलियो बनाउनमा केन्द्रित छ। समितिले विद्यमान सम्पत्तिको सर्वेक्षण र सम्भावित अवसरको तथ्याङ्क सङ्कलन गरिरहेको छ ।
आर्थिक जीवन्तता समितिले रिपोर्ट गर्छ कि २०२१ मा, डचटाउनले तेस्रो क्वाटरमा मात्र डचटाउनमा सार्वजनिक र निजी सुधारहरूमा $ 2021 भन्दा बढी लगानी गरेको देख्यो। थप रूपमा, तेह्र नयाँ व्यवसायहरू खोलिएका छन्, 500,000 नयाँ पूर्ण-समय रोजगारहरू सिर्जना गर्दै।
2022 को योजनाहरूमा डेटा म्यापिङ मार्फत छिमेकमा व्यावसायिक रिक्त स्थानहरूको मूल्याङ्कन र सम्बोधन, खाली व्यावसायिक स्थानहरूमा अवसरहरूको मार्केटिङ, र महत्त्वपूर्ण ल्यान्डमार्क व्यावसायिक गुणहरूमा लक्षित लगानी खोज्ने समावेश छ। समितिले विद्यमान व्यवसायहरूलाई बलियो बनाउन र नयाँ स्टार्टअपहरूलाई ग्राउन्ड दौड गर्न मद्दत गर्न थप शैक्षिक, वित्तीय र अन्य समर्थन स्रोतहरू सङ्कलन गर्ने योजना पनि बनाएको छ।
सह-अध्यक्षहरू: Jarred Irby र Nate Lindsey
Dutchtown Economic Vitality Committee मा सम्पर्क गर्नुहोस् ev@dutchtownstl.org
डचटाउन प्रवर्द्धन समिति द्वारा आयोजित उत्सवहरूको वर्गीकरणको साथ 2021 एक घटनापूर्ण वर्ष थियो।
२०२१ का केही हाइलाइटहरू:
डचटाउन गर्मी Vibes: जुनमा, हामीले प्रत्यक्ष सङ्गीत, खाना र पेय पदार्थ, स्थानीय विक्रेताहरू, र धेरै कुराहरू प्रस्तुत गर्ने समर स्ट्रीट फेस्टिवलको लागि डाउनटाउन डचटाउनमा छिमेकी र बाहिरका सयौं मानिसहरूलाई स्वागत गर्यौं।
डचटाउन चलचित्र रातहरू: तेस्रो वर्षको लागि, मार्क्वेट पार्कमा समर मूवी नाइट्सले परिवार-अनुकूल मनोरञ्जनको लागि वरपरका परिवारहरूलाई आकर्षित गर्यो। हामीले मार्क्वेट पार्क पूलमा डाइभ-इन चलचित्रको साथ सिजन बन्द गर्यौं।
२०२१ को गर्मीमा डचटाउन मेन स्ट्रिटहरू पुन: ब्रान्डिङ र पुन: लन्च गर्दै: हामीले ककटेल पार्टी र कोष सङ्कलन गरेर हाम्रो नयाँ नाम र नयाँ दिशा मनायौं। छिमेकी इनोवेशन केन्द्र। नयाँ नाम र ब्रान्डले संगठनको मिशनलाई अझ राम्रोसँग प्रतिबिम्बित गर्दछ र डचटाउनको लागि गन्तव्य ब्रान्ड विकास गर्ने प्रयासहरूसँग पङ्क्तिबद्ध गर्दछ।
शब्द फैलाउँदै: हामीले DutchtownSTL.org वेबसाइट र सामाजिक सञ्जाल च्यानलहरू मार्फत डचटाउन छिमेकलाई प्रचार गर्न जारी राख्यौं, सामुदायिक घटनाहरूमा अद्यावधिकहरू प्रदान गर्दै, छिमेकीहरूसँग स्रोत साझा गर्दै, र शब्द फैलाउँदै डचटाउनमा भइरहेका महान चीजहरूको बारेमा। (निश्चित गर्नुहोस् कि तपाइँ हामीलाई पछ्याउँदै हुनुहुन्छ फेसबुक, twitter, र इन्स्टाग्राम!)
आगामी वर्षमा, प्रवर्द्धन समितिले थप सामुदायिक-निर्माण कार्यक्रमहरू, जस्तै दोस्रो वार्षिक डचटाउन समर भाइब्स उत्सव, थप चलचित्र रातहरू, र छिमेकीहरूलाई एकअर्कासँग संलग्न हुन र डचटाउन मनाउन नयाँ कार्यक्रमहरू आयोजना गर्नेछ। मार्चमा, समितिले अर्को योजना बनाइरहेको छ डच जानुहोस्! घर जग्गा घटना जसले पहिलो पटक घर खरिदकर्ताहरूलाई छिमेकमा परिचय गराउनेछ र घरको स्वामित्वलाई वास्तविकता बनाउन मद्दत गर्न स्रोतहरू साझा गर्नेछ। समितिले यस क्षेत्रका छिमेकीहरू र आगन्तुकहरूबाट नयाँ चासो र संलग्नतालाई आकर्षित गर्न डचटाउन छिमेकी ब्रान्ड र प्रतिष्ठाको विकास गर्न जारी राख्नेछ।
सह-अध्यक्षहरू: निक फिन्डले र एडिना ओ'निल
डचटाउन प्रवर्द्धन समितिमा सम्पर्क गर्नुहोस् पदोन्नति @dutchtownstl.org
डचटाउन संगठन समितिले अन्य समितिहरूको प्रयासलाई पङ्क्तिबद्ध गर्न र उनीहरूले आफ्नो उद्देश्यमा कार्यान्वयन गर्न सक्ने सुनिश्चित गर्न काम गर्दछ। समितिको कोष संकलनको प्रयास बढेको छ दानको र हाम्रो संगठनको लागि पहिले नदेखेको स्तरहरूमा प्रायोजनहरू। थप रूपमा, नयाँ स्वयंसेवकहरू र समिति सदस्यहरूले छिमेक सुधार गर्न सयौं घण्टा समर्पित गरे।
2022 मा, संगठन समितिले थप दाताहरू, प्रायोजनहरू, र अनुदानहरू मार्फत नयाँ कोष स्रोतहरू खोज्न आफ्नो क्षमता विस्तार गर्ने आशा गर्दछ। थप रूपमा, समितिले स्वयंसेवक आधार विस्तार गर्न जारी राख्नेछ र थप छिमेकीहरूलाई सहभागी हुन आमन्त्रित गर्नेछ। समुदाय-संचालित डचटाउन समितिहरू.
सह-अध्यक्षहरू: लिन्डसे बारुच र पाउला गार्टनर
संगठन@dutchtownstl.org मा डचटाउन संगठन समितिलाई सम्पर्क गर्नुहोस्
थप २०२१ हाइलाइटहरू
उदार दाताको आग्रहमा (धन्यवाद, क्रफोर्ड-बट्ज बीमा!) Meramec Street ले पहिलो होस्ट गर्यो डचटाउन गर्मी Vibes जुन २०२१ को शुरुमा महोत्सव। कार्यक्रमले डाउनटाउन डचटाउन छिमेकमा लाइभ संगीत, छिमेकी किनमेल, खाना, पप-अप विक्रेताहरू, रोजगारदाताहरू र थप कुराहरू ल्यायो। चर्को गर्मीको बावजुद, डचटाउन र बाहिरका सयौं छिमेकीहरू उत्सव मनाउन बाहिर आए।
Marquette Park को साथ थप गर्दै
२०२० को गर्मीमा बन्द गरिसकेपछि, मार्क्वेट पार्क पोखरी २०२१ मा पुन: खोलियो। हामी पोखरी संरक्षकहरूका लागि नयाँ लाउन्ज फर्निचर अनावरण गर्न पाउँदा उत्साहित थियौं, जुन एक सफल माध्यमबाट प्राप्त भयो। 2019 कोष सङ्कलन प्रयास जसले साउथ साइडको एकमात्र नि:शुल्क आउटडोर पूलमा नयाँ सुविधा र रंगको स्प्ल्याश ल्याउन $7,000 सङ्कलन गर्‍यो।
नयाँ फुटसल कोर्ट
नयाँ सेन्ट लुइस सिटी SC मेजर लिग सकर टोली, सेन्ट लुइस पार्क विभागको शहर र धेरै निजी दाताहरूसँग साझेदारी मार्फत, मार्क्वेट पार्क अब सेन्ट लुइसमा पहिलो आउटडोर फुटसल कोर्ट। फुटसल एक स्केल-डाउन फुटबल खेल हो, साना समूह र नयाँ खेलाडीहरूको लागि अधिक पहुँचयोग्य। स्थानीय एमेच्योरहरू र लामो-समय फुटबल प्रशंसकहरू यस रोमाञ्चक, द्रुत-गति, अप-र-आउने खेलमा आफ्नो सीपहरू मास्टर गर्न नियमित रूपमा अदालतमा जान्छन्। अदालतले स्थानीय कलाकारद्वारा डिजाइन गरिएको सुन्दर डचटाउन-प्रेरित भित्ति चित्र प्रस्तुत गर्दछ Jayvn सोलोमन र डचटाउन छिमेकी ब्रान्डिङ खेलकुद अनुकूल निर्मित लक्ष्यहरू।
तेस्रो वर्षको लागि, हामीले छिमेकीहरूलाई मार्क्वेट पार्कमा स्वागत गर्यौं परिवार-अनुकूल गर्मी मनोरञ्जन हाम्रो 22-फिट ठूलो स्क्रिनमा। हाम्रो जून को प्रदर्शन जुरासिक पार्क डचटाउन समर भाइब्स फेस्टिभल पछ्याइएको हाम्रो आजसम्मको सबैभन्दा राम्रोसँग उपस्थित भएको चलचित्र रात थियो। र अगस्टमा, हामीले मार्क्वेट पार्क पूलमा डाइभ-इन प्रदर्शनको लागि सेट अप गर्यौं कोको जसले पोखरीको २०२१ समापन दिनको मजा लिन चारैतिरबाट छिमेकीहरूलाई ल्यायो।
मा हाम्रो पार्टनरहरू मार्क्वेट समुदाय दिवस एक उत्कृष्ट आयोजित ब्याक-टू-स्कूल घटना 2021 को अगस्टमा Marquette Park मा। MCD ले सयौं बालबालिकालाई ब्याकप्याक र विद्यालयका सामग्री, कपडा, कपाल काट्ने र थप कुराहरू उपलब्ध गराएको छ। कार्यक्रममा सामुदायिक संस्थाहरू र सेवा प्रदायकहरूको विस्तृत श्रृंखलाबाट खाना, मनोरञ्जन, विक्रेताहरू, र स्रोतहरू पनि समावेश थिए।
डचटाउनमा नयाँ व्यवसायहरूलाई स्वागत गर्दै
हामी २०२१ मा डचटाउनमा धेरै नयाँ व्यवसायहरूलाई स्वागत गर्न उत्साहित थियौं। मलाई होइन बुटिक बिर्सनुहोस् भर्जिनिया एभिन्यूमा आधुनिक महिला कपडा, गहना, सामान र शरीर हेरचाह उत्पादनहरूको क्युरेट गरिएको चयन ल्याउँछ। अर्को ढोका, रचनात्मक अभिव्यक्ति कस्टम डिजाइन एक प्रकारको उपहार र अनुकूलन पोशाक प्रदान गर्दछ।
थप तल भर्जिनिया, तपाइँको ठाउँ डिनर पुरानो आइरन बार्ली स्पेसमा खोलिएको, उत्कृष्ट आत्मा खाना, एक पूर्ण बार, र स्वागत वातावरण प्रदान गर्दै। भर्जिनियामा पनि, टाइम्स ट्याटू को चिन्ह सेन्ट लुइसका केही प्रतिभाशाली ट्याटु कलाकारहरू होस्ट गर्ने एउटा नयाँ कपाल सैलुनलाई एउटा नयाँ पसलमा रूपान्तरण गर्नुभयो।
यो शहरी Eats छिमेकी फूड हल तीन नयाँ व्यापारीहरु संग आफ्नो चयन फराकिलो -सुगोई सुशी, सबै रोल्ड अप, र Crepes र व्यवहार गर्दछ। तीनै जनाले रेभ समीक्षाहरू प्राप्त गरेका छन् किनभने तिनीहरूले डचटाउनमा स्वादिष्ट व्यवहारको विविधता ल्याएका छन्। Meramec पार, पलक साझा-स्पेस रिटेल इनक्यूबेटरको रूपमा खोलिएको छ, स्थानीय व्यापारीहरू र कलाकारहरूलाई उनीहरूको सामानहरू बेच्नको लागि स्वागत ठाउँ प्रदान गर्दै।
स्वयंसेवकहरू: डचटाउन मुख्य सडकहरूको ब्याकबोन
हाल, Dutchtown Main Streets सबै स्वयंसेवक संस्था हो। र 2021 मा, स्वयंसेवकहरूले छिमेकको लागि सयौं घण्टा काममा राखे।
हाम्रा स्वयंसेवकहरू, हाम्रा सहित निदेशक बोर्ड, साँच्चै यो सबै गर्नुहोस् — बहीखाताको ब्याक-अफिस कार्यहरू, कोष सङ्कलन, र मार्केटिङ, छिमेकको सफाई र घटनाहरूको लागि उपकरणहरू ढुवानी गर्ने थकित श्रम सम्म। 50 भन्दा बढी छिमेकीहरूले 2021 मा डचटाउन छिमेकमा आफ्नो समय, सीप र श्रम योगदान गरे, र त्यसको लागि, हामी यो भन्दा धेरै सराहना गर्न सक्दैनौं।
निस्सन्देह, हामी सधैं थप मद्दत प्रयोग गर्न सक्छौं। हाम्रो एक मा सामेल हुन विचार गर्नुहोस् डचटाउन समितिहरु छिमेकको आवश्यकतासँग कसरी आफ्नो रुचि र सीपहरू जोड्न सकिन्छ भनेर जान्नको लागि। वा आँखा बाहिर राख्नुहोस् सफा घटनाहरू र अन्य हातमा स्वयंसेवक अवसरहरू।
यो उपचार हिंसा २०२० को टेल एन्डमा डचटाउनमा सुरु गरिएको कार्यक्रमले छिमेकमा उल्लेखनीय प्रभाव देखाएको छ। Cure Violence ले बन्दुक हिंसालाई जनस्वास्थ्य महामारीको रूपमा हेर्छ र अपराधको मूल कारणहरूलाई सम्बोधन गर्ने र हिंसाको चक्र तोड्ने लक्ष्य राख्छ।
प्रशिक्षित हिंसा अवरोधकहरूले परिस्थिति बन्दुक हिंसा र बदला लिनु अघि अनगिन्ती विवादहरू मध्यस्थता गरेका छन्। Cure Violence Team पक्षहरूलाई जागिरहरू प्राप्त गर्न, मानसिक स्वास्थ्य मूल्याङ्कन र उपचार प्राप्त गर्न, र सम्भावित अपराधीहरूलाई हिंसा र आपराधिक गतिविधिबाट हटाउन अन्य सामाजिक सेवाहरू उपलब्ध गराउन ती हस्तक्षेपहरूभन्दा बाहिर जान्छ।
तर उपचार हिंसा टोली त्यहाँ रोकिदैन। तिनीहरू छिमेकका कार्यक्रमहरूमा निरन्तर उपस्थिति भएका छन्, सफाइमा मद्दत गर्न हात उधारो दिने, समुदायका सदस्यहरूलाई संलग्न गराउने, र सबैका लागि राम्रो डचटाउन निर्माण गर्ने फराकिलो प्रयासहरूलाई समर्थन गर्ने। रोजगार जडान डचटाउनमा उपचार हिंसा कार्यक्रम प्रबन्ध गर्दछ, र तिनीहरू सबै प्रकारका कार्यक्रमहरू र कार्यक्रमहरूमा उत्सुक साझेदार र प्रायोजक भएका छन्।
मा हाम्रो पार्टनरहरू डचटाउन साउथ कम्युनिटी कर्पोरेशन कार्यान्वयनमा कडा मेहनत गरेका छन् Gravois-Jefferson ऐतिहासिक पड़ोसी योजना। सेन्ट लुइसको शहरले योजनालाई अपनायो, र डचटाउन मेन स्ट्रीटले योजनालाई हाम्रो आफ्नै कामको लागि गाइडको रूपमा प्रयोग गर्न DSCC सँग काम गरेको छ।
2021 केहि शानदार समाचार संग बन्द भयो: स्थानीय गैर नाफामुखी आवास विकासकर्ता लुथरन विकास समूह तिनीहरूको सुरुवात गर्न सुरक्षित कोष Marquette Homes परियोजना। परियोजनाले डचटाउन र ग्राभोइस पार्कमा 60 नयाँ किफायती अपार्टमेन्टहरू ल्याउनेछ। Marquette Homes मा डाउनटाउन डचटाउनको मुटुमा रहेको 3305 Meramec Street मा लामो समयदेखि परित्याग गरिएको भवन सहित गम्भीर रूपमा बिग्रिएका सम्पत्तिहरूको नयाँ निर्माण र पुनर्स्थापना दुवै समावेश हुनेछ।
लुथरन विकास समूहले पहिले नेतृत्व गरेको थियो चिप्पेवा पार्क विकास, अर्को ठूलो, छरिएको साइट परियोजना जसले डचटाउन र ग्राभोइस पार्कमा 15 वटा भवनहरू पुनर्स्थापित गर्यो। तिनीहरू धेरै छिमेकी कार्यक्रमहरूको दयालु प्रायोजक पनि भएका छन्।
सेन्ट जोसेफ हाउसिंग पहल
डचटाउनलाई रूपान्तरण गर्ने अर्को संस्था हो सेन्ट जोसेफ हाउसिंग पहल। SJHI ले छिमेकको दक्षिणी छेउमा ठूला पुनर्वास परियोजनाहरू लिएको छ, त्यसपछि कम र मध्यम आय भएका परिवारहरूलाई घरहरू खरिद गर्न र आर्थिक सुरक्षा र स्वतन्त्रताको विकास गर्न मद्दत गर्दै। सेन्ट जोसेफ हाउसिङ इनिसिएटिभले नयाँ छिमेकीहरूलाई समुदायसँग संलग्न गराउन र बलियो छिमेक निर्माण गर्न मद्दत गर्न घर खरिदकर्ताहरूलाई सहयोग गर्नुभन्दा पनि बाहिर जान्छ। SJHI ग्राहकहरु पनि गर्न थालेका छन् ब्लकहरू व्यवस्थित गर्नुहोस् आफ्नो नयाँ घर वरपर।
हाम्रा दाताहरूलाई धन्यवाद
हामीले 2021 मा अत्यन्तै सफल Give STL डे मनायौं, धेरै विद्यमान र नयाँ दाताहरूलाई धन्यवाद, साथै उदार मिल्दो दानको साथ। क्रफोर्ड-बट्ज बीमा। मे मा एक दिन, हामीले प्रभावशाली $ 10,000 उठायौं।
गत वर्ष, हामीले $ 10,000 सुरक्षित गर्ने उच्च लक्ष्य राख्यौं दोहोरिने दानहरू दिगो। हामीले त्यो लक्ष्य पूरा गर्न सकेनौं, तर लक्ष्यमा पुग्ने प्रशस्त अवसरहरू छन् तपाईको सहयोगले। एक मासिक दानलाई सँभाल्ने कुनै पनि रकमले डचटाउनको मुख्य सडकहरूले डचटाउनमा ग्रासरुट समुदायको नेतृत्वमा काममा ध्यान केन्द्रित गर्न जारी राख्न सक्छ भनी सुनिश्चित गर्दछ।
तपाईं आफ्नो दिगो दान सेट अप गर्न सक्नुहुन्छ वा एक पटक योगदान गर्न सक्नुहुन्छ dutchtownstl.org/donate.
एक पटक दान स्थायी दान
दानहरू शानदार छन्, तर त्यो मद्दत गर्ने एक मात्र तरिका होइन। डचटाउन मेन स्ट्रिटहरू सक्रिय र संलग्न छिमेकीहरू र सामुदायिक साझेदारहरूको सहभागितामा सबैका लागि जीवन्त, सम्पन्न डचटाउन छिमेक निर्माण गर्न मद्दत गर्दछ।
हामीलाई सधैं नयाँ स्वयंसेवक र नयाँ दृष्टिकोण चाहिन्छ। हाम्रो एक मा सामेल हुनुहोस् डचटाउन समितिहरु—डिजाइन, आर्थिक जीवन्तता, प्रवर्द्धन, र संगठन—हाम्रो भविष्यको योजना बनाउन र हाम्रो समुदायलाई रूपान्तरण गर्ने तल्लो तहको काम गर्न मद्दत गर्न। अधिक जान्नुहोस् र यहाँ साइन अप गर्नुहोस्, वा इमेल info@dutchtownstl.org तपाईंको लागि सही स्वयंसेवक अवसरहरू फेला पार्न मद्दतको लागि।
वा, बाहिर आउनुहोस् र आफ्नो समर्थन देखाउनुहोस्। आफ्ना छिमेकीहरूलाई भेट्नुहोस्, केही रमाइलो गर्नुहोस्, र डचटाउनले हाम्रो छिमेकी कार्यक्रमहरू मार्फत प्रस्ताव गरेको सबै हेर्नुहोस्। तपाईं सधैं के भइरहेको छ पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ dutchtownstl.org/cocolate.
तल दायर गरिएको डचटाउन मुख्य सडकहरू. सबै कोटीहरू देखाउनुहोस्. डचटाउन र डचटाउन मुख्य सडकहरू. कम कोटीहरू देखाउनुहोस्.
यस पोस्ट साझा गर्नुहोस् फेसबुक, twitter, वा मार्फत इमेल। यो पोष्ट अन्तिम पटक अपडेट गरिएको थियो अप्रिल 17th, 2022 .
डचटाउन STL.org डचटाउन मुख्य सडकहरू डचटाउन मुख्य सडकको २०२१ वार्षिक प्रतिवेदन